Daandiin gara magaalaa Awwadaay seensisu cufamee oole - NuuralHudaa
Daandiin gara magaalaa Awwadaay seensisu cufamee oole
On Oct 25, 2018 13
Godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaayitti daandiiwwan hundi cufamanii oolan. Sababni daandiin cufameef walitti bu’iinsa naannoo Soomalee fi naannoo Oromiyaa jiddutti ka’ee ture hordofuun, lubbuu namaa magaalaa Awwadaay keessatti darbe tureen walqabatee dargaggoonni magaalattii heddu hanga har’aatti murtii tokko malee hidhamuu isaanii mormuun akka tahe gabaafame.
Dargaggoonni hidhaman yakka jedhame akka hin raawwatin falmachaa turanis, murtiin tokkollee osoo isaan irratti hin kennamin mana hidhaa keessaatti dararamaa jiru, akkasumas dargaggoota kana jidduu dubartoonni mana hidhaa keessatti dhalani Jiraatu maatiiwwan isaanii nuuf ibsan.
Jiraattonni magaalaa Awwadaay hanga Oromiyaatti imaluun iyyannoo dhiheeffataa kan turan tahus, hanga har’aatti furmaata tokkollee argatuu dhabuu Isaanii himan. Guyyaa har’aa immoo daandiiwwaan magaalaa Awwadaay seensisan cufuun kan mormii dhageessisaa turan tahuu odeeyfannoon naannawa irraa nu gahe ni addeessa.
July 7, 2022 sa;aa 12:42 am Update tahe